A izivakashi ezinkulu eziningi langawo wonke umphefumulo wayo futhi ngayo yonke inhliziyo yakho bachitha iholidi labo esiqhingini saseKhupro. I zokungcebeleka elikhulu kunawo wonke esiqhingini saseKhupro - Protaras, Ayia Napa, ePhafu, Larnaca nabanye - zihlale uyakujabulela ukwamukela izihambi abakhathele of gray kwansuku impilo yasedolobheni.
amabhishi Soft segolide sizungezwe Itshe elincane eliluhlaza eliyigugu futhi ithenda, ngomusa ehlasela ogwini loLwandle iMedithera kuzikhala elalivuliwe ezikhanga izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba. Futhi kubonakala ukuthi efudumele, wathela usawoti olwandle emoyeni kwakwande ngokusebenzisa womuntu: zonke milimitha zesikhumba, izinwele nezinzipho, ngisho inuka esiqhingini saseKhupro. Protaras - omncane yonke zokungcebeleka saka kuleli pharadesi iMedithera. Ngokungafani umakhelwane walo - incendiary Ayia Napa - kule ndawo yeholide unika izivakashi obusisiwe, enokuthula futhi eziphumulele iholide.
Magnificent iphakama abukhali amatshe kudutshulwa ukuzilwela okwesibhakabhaka okugqamile esibhakabhakeni azure, sizungezwe amabhishi segolide, sengathi bazivikele ububi bezwe ngaphandle, amahlozi kumnandi futhi ezikhangayo emangalisa - konke Protaras. Cyprus idume wonke iplanethi nge ukuzilibazisa yabo Amazing nokuzijabulisa. zokudlela ethokomele kanye amathilomu, ukunikela abahambi cuisine Mediterranean elinendawo ilanga ezithambile kanye imilingo, heady iphunga satiate yindlala emahlathini uyisivakashi.
ubuhle Qinisekile cwe Cape yamaGreki livela phambi kwamehlo indawo izivakashi esiqhingini saseKhupro - Protaras. Ukufihla ngaphansi uphahla imigede ulwandle yabo enamandla emangalisayo enhle, Cape ejabulisa diving indawo langa we zezinto eziphila emanzini. Zonke izinhlobo amanzi ezemidlalo ezifana windsurfing, Ukushushuluza amanzi, scuba diving, Snorkelling, nanela abalandeli hhayi kuphela lokuzijabulisa esebenzayo, kodwa futhi Wabasaqalayo. amabhishi Soft, bamelele okhalweni lwakho kwelanga mnene futhi ngobumnene ezitshekile phansi olwandle - ungakwazi usafisa ukuba eziphumulele iholidi lomkhaya, kulesi siqhingi ethandwa saseKhupro. Protaras iyindawo kumnandi lapho lokhu eduze zithandelana esidlule: Chapel lasendulo phezulu edwaleni, amancane "abavuthiwe 'yokucima ukoma futhi emnyuziyamu, owaziwa ngokuba nemibukiso yayo emhlabeni wonke, nge ngabandayo sibheke abasha perky amahhotela, nemishayo, zokudlela kanye ema-disco ehlakazekile kulo resort esiqhingini saseKhupro - Protaras. Amahhotela atholakala lapha e omningi ziyehluka yayo isigaba intengo, kodwa naphezu kwalokhu, yilowo nalowo kubo unikeza isevisi enkulu futhi izinhlelo best.
Fans of amasayithi kanye izikhumbuzo unokuthile ukujabulela kule ndawo yeholide ajabulisayo: Historical Museum presents izivakashi ezihlukahlukene yezandla ka ababumbi nezinye abaculi, esukela ekupheleni kwekhulu le-19. Ngenxa Museum ngokulinganiswa ayemncane, ke edonsela inqwaba izivakashi nesithakazelo emlandweni walesi siqhingi. buka ekhexisayo Protaras resort inikeza izivakashi unsophisticated kusukela egqumeni, okuyinto ibandla Agios Ellios. Kwakhiwe isakhiwo sokulondoloza amagugu embukisweni encane yobuciko WaseByzantium iyona Chapel of the Blessed Virgin Mary abahambi.
Ukuze uthole ukuphila ephapheme ubusuku ngeke udumazeke: ecashele Protaras nje off Cape yamaGreki, Ayia Napa resort umema izivakashi ukulangazelela yayo disco esimnandi-non-stop, futhi zokudlela ezihamba phambili Amabha ngeke ucime ukoma nendlala futhi wenze i-reserve amabutho izivakashi sikhathele dancing.
Indawo eyayithandwa uphumule yokungcebeleka futhi aquarium, okuyinto ezihlukahlukene zezinto eziphila emanzini ezivela emhlabeni wonke ekhaya: izingwenya, sawfish, ulwandle izimfudu, clown izinhlanzi ngisho penguins. Ngaphezu kwalokho, aquarium inikeza izivakashi ukumaka sikhathi sikhumbuleke - usuku lokuzalwa, ephathini ukugubha ukubandakanyeka noma kwenye idethi ikhumbuleke - eduze eziphila olwandle
ukwangiwa Solar Protaras resort nijabule njalo ukusithatha ngasogwini lwalo segolide isiphelile befuna kwansuku zonke futhi ngentuthu zamatshe izingane jungle ubanikeze ucezu injabulo.
Isixubho Vitality Precision Hlanza Oral-B: incazelo, yeziqondiso, izibuyekezo zamakhasimende
Yini izilwane ezimbili chambered inhliziyo? Sakhiwo kwegazi
Isimila umaka CA 19-9. Ukuhlaziya CA 19-9: kuyinsakavukela futhi lapho waphakamisa